New ohere a ga-mesikwuru agbata obi 7/12! | Holmbygden.se
New ohere a ga-mesikwuru agbata obi 7/12!
Ihe na 27 November, 2015 site Holmbygden.se
The na ọzụzụ a haziri Medelpads Rescue Association na bụ free. Holm är tillsammans med några andra orter i Medelpad ensam i Sverige om att kunna larmas direkt på detta sätt vid olika olyckor.
Ikpofu ihe mberede okporo ụzọ
mmiri na-eri ihe e mere
Heart- & Iji tụtee mmadụ na AED
Ọtụtụ mgbe mfe omume mkpa – huvudsaken de sker snabbt. Nke a na-eme ka usoro mkpa otú nri Holm p.g.a. na na ihe mberede na-emekarị bụ banyere. 20-60 nkeji si kacha nso ụgbọ ihe mberede na nnapụta ọrụ.
`I MA Holm nwere ya Defibrillators!?
Läs mer och se reportage om Förstärkt medmänniska på holmbygden.se/akut (hụrụ n'ụzọ dị mfe site “ ” na n'elu n'ụlọ peeji nke).
K ontact na ajụjụ:
Thomas Åslin, Fire soja / Ne Chain
Gụọ ihe banyere oru ngo (fr. 2012), Pịa ebe.Close.
People n'ime ime obodo na-apụghị ruru otu larịị nke nchedo mberede dị ka ndị mmadụ na ebe ndị mepere emepe. The obodo amaala kwesịrị inwe "nchedo nha" megide mberede na nke a oru ngo na-ezube mma iru a ebumnobi.
Ime obodo nwere obere nchedo mberede karịa ebe ndị mepere emepe ebe oké- na mberede agha dabeere na ebe elu bi njupụta. Enweghị ihe mgbochi na-eme obodo ọha nwere ikike mbụ nzọ otú bụghị ruru akụkụ nke Act na Prevention of ọghọm.
Mma nchedo mberede na obodo site na nkwado maka onye.
Zụlite a echiche maka nchedo ihe mberede na ime obodo. The echiche akwuru na ebe ọ maara na ihe ndị kasị ihere mberede na ime obodo na nke jikoro (ndụmọdụ, ozi, elekọta wdg) iji belata ma jikwaa ndị a. Ugbu echiche echiche maka Management MRF site October 2012.
Ịchọ ọwa si otú mmụta na ozi nwere ike ejikwara n'usoro, na site na ndị a ịhụ ndị chọrọ ịbụ obodo "nche ndị mmadụ" (tụlee aha maka ndị a ndị mmadụ). The nọmba na-adabere na mmasị na size nke obodo
N'oge October-December 2012, mejuputa ụgbọelu na echiche nke kacha nta 3-5 obodo n'obodo ukwu na n'ime ime obodo.
January-February 2013, inwale ngo na ya ike na ịzụlite ọrụ n'ime a na-adịgide adịgide usoro nke MRF na FIP si ọchịchị ọrụ ike mezue nchedo mberede. The nwale ga-agụnye ekwe omume nke SMS Mkpu ma ọ bụ ndị ka na ike ga-zigara "nche ndị mmadụ" dị ka nke ọma dị ka ohere ịme na ọtụtụ ebe mgbe e kwekọrịtara chọrọ ibiere (e.g. 30 My onyinye obodo ọkụ ọrụ). The ọrụ chịkọtara akụkọ na ọnọde management otu MRF ikpeazụ February 2013.